Realme GT Master Edition, falanqayn qoto dheer iyo tijaabada kaamerada | Androidsis
Miguel Hernandez | 23/08/2021 09:55 | La cusbooneysiiyay 25/08/2021 00:36 | Noticias, Reviews
Haddii aad si joogto ah noola socotid waad hore u ogaan doontaa taas waxaan dhawaan dib u eegnay Realme GT, aalad ka socota shirkadda Aasiya oo doonaysay inay riixdo mantra -ka qiimo lacag inta isticmaaleyaasha Android aad mooddo inay raadinayaan. Hadda waxaan dhexdeenna ku haysannaa soo -saar aanad doonayn inaad seegto.
Nagala soo hel Realme GT Master Edition, aalad lagu caleemo saaray qaacido aan hore u naqaannay. Waxaan si qoto dheer u eegeynaa isku-darkaan Realme ee ugu dambeeyay oo aan ogaanno haddii ay runtii tahay mid xiiso badan sida ay u egtahay. Ha seegin dareennadayada, maxaa adiga kuu ahaa?
Waxaan go'aansannay inaan waxyar ka beddelno qaabkayaga dib -u -eegista, markan unboxing -ka ayaa ka bixi doona YouTube -ka waxaadna ku raaxaysan kartaa shabakadahayaga bulshada. Waxaad fiirin kartaa unboxing of this Realme GT Master Edition Iyada oo loo marayo Twitter sidoo kale iyada oo loo marayo Instagram, markaa ha seegin oo ka faa'iidayso fursadda inaad na raacdo. Haddii aad jeceshahay, waxaad ku iibsan kartaa AliExpress dalab hordhac ah.
1 Naqshad Jabaaniis ah, oo qalooca qalooca
3 Waxyaabaha ku jira warbaahinta badan
5 Isku xirnaanta iyo ismaamulka
7 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
Naqshad Jabaaniis ah, oo qalooca qalooca
In kasta oo ay ka dhaxasho khadadka waaweyn Realme GT, Daabacaaddan Master -ka waxay leedahay faahfaahin gaar ah oo ka dhigaysa xoogaa soo jiidasho leh, ama ugu yaraan wax ka sii xarrago badan. Waxaan leenahay shaarbo polycarbonate ah, wax si cad looga dareemi karo culeyska 178 garaam (maqaar vegan ayaa ku jira). Xaashida vinyl ee maqaarka u eg, ama sida ay hadda ugu yeeraan maqaar vegan dhabarka waxay leedahay gargaar aad u soo jiidasho leh iyo dhammeystir tayo sare leh.
Cabirrada: 159 * 73 * 8 (8,7mm oo leh maqaar vegan)
Miisaanka: 174 garaam (178 garaam oo leh maqaar vegan)
Dhiniciisa, dhererka 16 sentimitir ayaa aad u raaxo leh maalin kasta iyadoo la tixgelinayo iftiinkeeda iyo dhumucdiisuna tahay 8 milimitir. Qaybta kaameeraha dambe ee caanka ah ayaa ah mid la yaab leh, halka badhanka Awooddu uu ku sii jeedo garka midig iyo goobaha mugga bidixda. Dhagaxa hoose, USB-C waxaa lala tagay daloolka afhayeenka iyo 3,5 mm Jack oo weli jira.
Sanduuqa waxaa ku jira kiish silikoon oo matte ah oo aad u wanaagsan taasina waxay gebi ahaanba ku dayataa naqshaddii asalka ahayd ee aaladda, wax cajiib ah. Sidoo kale waxay ku dhacdaa filimka ilaaliyaha shaashadda caadiga ah ee hore loo rakibay iyo inaan ku talinayo in lagu beddelo galaas kulul, wax sare u qaadaya dareenka tayada mobiil kasta.
Hagaajinta qalabka si loo hagaajiyo qiimaha, Qoraalkan Realme GT Master wuxuu la imanayaa Snapdragon 778G oo la jaan qaadaya shabakadaha 5G oo ay weheliyaan 8 GB oo LPDDR5 RAM ah kaas oo lagu kordhin doono 3 GB oo RAM dalwaddii ah, ugu yaraan qaybta aan tijaabinay oo aan diidnay falanqayntaan. Dhinacan, Realme ma xoqdo, maadaama ay ku dhacdo 128 GB ee kaydinta, in kasta oo aanaan awoodin inaan xaqiijinno inuu leeyahay nidaam UFS 3.1 sida ay ugu dhacdo walaalkeed ka weyn. Dhanka GPU -ga, ku sharad Adreno 642L sidii la filayay.
Tusaale GT Master Edition
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 778G - 5G
Kaydinta gudaha 128
Kaamirada gadaal 64MP f / 1.8 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP Macro f / 2.4
Kaamirada hore 32 f / 2.5 GA 78º
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.2 - 5G DualSIM- WiFi 6 - NFC - GPS Dual
Batariga 4.300 mAh oo leh Eedeyn Degdeg ah 65W
Natiijadu waa dheecaan, fududeynta shaqada iyo waqtiyada raridda oo yaraada. Waxaan aad u jeclayn waxqabadka shabakadda WiFi 6 sida aad ka arki karto fiidiyaha. Waxaa weheliya Realme UI 2.0, oo mar kale nooga tagaysa dhadhan xoogaa la yaab leh afkeenna sababta oo ah bloatware -ka ayaa ku jira oo qofna ma weydiisan.
Waxyaabaha ku jira warbaahinta badan
Waxaan leenahay guddi ku dhawaad ​​6,5 inji ah oo leh qaraarka FullHD + oo ay soo saartay Samsung, gaar ahaan Super AMOLED Iyada oo leh cabbir cusboonaysiin ah oo ah 120 Hz oo labanlaabmay shaashadda taabashada, waxay leedahay 100% of the DCI-P3 spectrum, taas oo ka dhigaysa guddiga mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada ugu weyn ee aaladda. Iftiinka ayaa aad ugu filan kuwa dibedda ah ee aadka u dalbanaya runtiina waan ku raaxaysannay isticmaalkiisa.
Marka la eego mugga, in kasta oo aan ku dhawaaqnay af -hayeen laba -laable ah, waxaan helnay mid aad u sarreeya kan hoose oo leh mug ku filan oo tayo sare leh, Ilaa iyo inta aadan si qarsoodi ah gacantaada ugu daboolin, laga yaabee in ay tahay muuqaalka ugu yar ee waayo -aragnimada warbaahinnada badan.
Marka laga hadlayo saddexda dareemayaasha gadaal, waxaan helnaa natiijo u dhiganta tii Realme GT, ee Daabacaadda Master -ka waxaan wali haysannaa dareeme weyn oo aad u fiican laakiin shirkad aan ku filnayn:
Dareenka ugu weyn: 64 MP f / 1,8
Sensor Xagal Balaadhan: 8 MP f / 2,3 oo leh 119º
Dareenka Maqaarka: 2 MP f / 2,4
Natiijada kama dambaysta ah, dareeraha ugu weyn wuxuu bixiyaa waxqabad wanaagsan illaa iyo inta aanan dalbanayn isbarbardhigyada iftiinka. Xagasha Wide, zooms -ka iyo wax kasta oo ka sarreeya Macro waa shirkad isku -dhafan laakiin taas oo kaliya ku ifaysa xaalado aad u wanaagsan. Kaamiradu, inkasta oo ay leedahay ikhtiyaarro kala duwan, haddana waxaa si cad u saameeya tayada hoose ee dareemayaasha “sare”.
Qaabka Sawirka iyo kamaradda selfie (32 MP oo leh f / 2.5 aperture) waxay mar kale shardi u yihiin softiweer xad -dhaaf ah. In kasta oo kamaradda hore ay si fiican u qabato xaaladaha iftiinka wanaagsan, 'sawirka' hore iyo kan dambe ayaa leh waxyaabo badan oo la hagaajin karo.
Ku saabsan duubista fiidiyowga, Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad si toos ah u dhex mariso falanqaynta fiidiyahayaga halkaas oo aan ku sameynay duubitaanno waqtiga dhabta ah oo xor u ah dhammaan dareemayaasha Realme GT Master Edition.
Isku xirnaanta iyo ismaamulka
Waxaan la yaabnay waxqabadka kaarkaaga shabakadda WiFi 6 casri ah oo noo saamaxday inaan si wanaagsan uga faa’idaysano wax-qabadka isku-xidhkayaga Fibre Optic. Nasiib darro ma awoodno inaan ka helno natiijooyin shabakadda 5G sababtoo ah caymis xumo.
Bateriga 4.300 mAh oo leh 65W dhaqso ah Waxay muujineysaa wax ka badan ku filan wax -qabadka maalinlaha ah, waxaan horeyba u ogeyn inay tani ku xirnaan doonto inta badan adeegsiga aan ka sameyno terminaalka.
Waxaan ka haynaa Realme shaqo wanaagsan annagoo ku talagalnay inaan "caanno" GT Master Edition, hagaajinta naqshadeynta iyo astaamaha si loo helo qiime dhan 299 euro (iibka ah) oo si dhakhso leh ugu beddelaya naqshadeyn, karti iyo wax-ku-beddelid mid ka mid ah boosteejooyinka dhammaadka ugu sarreeya.
Ku dhejiyay: 23 August 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 25 August 2021
Naqshad taxaddar leh oo cajiib ah, aad u fudud
Qalab aad u qiimo badan
Shaashad wanaagsan iyo ku dallac degdeg ah 65W
Kaamirada waa la hagaajin karaa
Waa hagaag, laakiin weli caag ah
Bloatware gudaha Realme UI 2.0
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme GT Master Edition, Naqshad Jabaaniis ah si dib loogu qiyaaso guusha [Falanqaynta]
Hadda waxaa laga heli karaa Cubot MAX3 oo leh kamarad 48 MP ah $ 99
Xiaomi Mi 11T Pro: astaamaha suurtagalka ah, qeexitaannada, qiimaha iyo taariikhda siideynta